तपाईंको ट्विटर ह्यान्डललाई परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईंको फलोअरहरू हराउनु बिना Martech Zone
बिहीबार, अगस्ट 24, 2017 शुक्रवार, सेप्टेम्बर 1, 2017 Douglas Karr
हामी हाम्रो रिब्रेन्डिंग मार्फत काम गरिरहेका छौं मार्केटिंग टेक्नोलोजी ब्लग लाई मार्टेक. हामी भविष्यमा एउटा पोस्ट साझा गर्नेछौं किन हामी त्यो पुनःब्रान्डिंगको माध्यमबाट किन जाँदैछौं - तर धेरै जसो यो शव्द हटाउने वरिपरि केन्द्रित छ ब्लग हाम्रो ब्रान्डि fromबाट।
भाग्यवस, हाम्रा धेरैजसो सामाजिक खाताहरू र प्रयोगकर्तानामहरूको अवधि थिएन ब्लग तिनीहरूमा - एक बाहेक! हाम्रो ट्विटर खाता @mktgtechblog थियो। यो वास्तवमै पहिलो दिन देखि एक निरीक्षण थियो। प्रत्येक चोटि कसैले यो प्रयोगकर्तानाम के हो भनेर सोधे, म यसलाई मिक्टग-टेक-ब्लग हिज्जे थियो, त्यसपछि यसलाई केहि धेरै पटक दोहोर्याउनुहोस्।
हामी मार्केटिंग टेकब्लॉग.कट बाट साइट माईग्रेट गरेका छौं martech.zone, मैले टर्मक भएको प्रयोगकर्तानामको लागि ट्विटर खोजें मार्टेक यसमा। दुर्भाग्यवस, धेरै जसो लिइएको थियो तर म यो हेर्न सक्षम थिए temartech_zone उपलब्ध थियो।
रोक्नुहोस्, यसलाई दर्ता नगर्नुहोस् ... अझै
यो जहाँ धेरै मानिसहरु गलत हुन्छन्। तिनीहरूले एक दर्ता नयाँ ह्याण्डल ट्वीटरमा र त्यसपछि तिनीहरूको मूल खातामा जानुहोस् र सबैलाई बताउनुहोस् जुन तिनीहरू सारिएका छन्। समस्या यो हो कि केवल अघिल्लो अनुयायीहरूको सानो अंशले नयाँ खाता अनुसरण गर्न प्रयास गर्दछ। हाम्रो केसमा हामीले हजारौं प्रयोगकर्ताहरू गुमाउने छौं यदि हामीले त्यसो गर्यौं भने।
तपाइँको ट्विटर ह्यान्डल कसरी परिवर्तन गर्ने
धेरै साइटहरूको विपरीत, ट्विटरले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम परिवर्तन गर्नुहोस्! म @mktgtechblog लाई परिवर्तन गर्न सक्षम भयो @market_zone मेरो खातामा र हाम्रो ,34,000 XNUMX,००० अनुयायीहरू मध्ये कुनै पनि गुमाउने छैनन हामीले आकर्षित गर्न कडा मेहनत गरेका छौं। एक पटक नयाँ प्रयोगकर्तानाम सक्षम भएपछि, हामी तुरुन्तै हाम्रो पुरानो प्रयोगकर्ता नाम दर्ता गर्‍यौं र हामी सार्‍यौं भन्ने सन्देश राख्यौं।
तपाईंको ट्विटर ह्यान्डल परिवर्तन गर्न, तपाईंले आफ्नो नेभिगेट गर्न आवश्यक पर्दछ सेटिङ् पृष्ठ (प्रोफाइल पृष्ठ हैन)। तपाईंको ह्यान्डल पहिलो फिल्डमा सूचीबद्ध छ। तपाईं नयाँ ट्विटर ह्यान्डल टाइप गर्न शुरू गर्न सक्नुहुन्छ कि यो आरक्षित छ कि छैन भनेर हेर्न। एकचोटि तपाईंले आफूले चाहेको अनुसार अपडेट गर्नुभयो, मात्र तपाईंको सेटिंग्स बचत गर्नुहोस्। अब तपाईंले गर्नुभयो तपाईंको ट्विटर ह्यान्डल परिवर्तन भयो र अनुयायी कहिल्यै हराएन!
यदि मान्छे तपाइँको पुरानो ट्विटर ह्यान्डल खोज्दै हुनुहुन्छ भने के हुन्छ? ठीक छ, यो राम्रो भाग हो - अब आफ्नो दर्ता गर्नुहोस् पुरानो ट्विटर ह्यान्डल फेरी र एक सन्देश राख्नुहोस् मान्छेहरु लाई तपाईले सर्नु भएको कुरा थाहा दिनु हो।
हामीले निम्न सन्देशलाई पुरानो खातामा राख्यौं घटनामा कि कसैले अर्को साईटमा लिंक क्लिक गर्न सक्दछ वा खोज परिणामहरूमा खाता फेला पार्न सक्दछ। यस तरिकाले उनीहरूले थाहा पाउँनेछन् कि हामी सारिएका छौं र अपडेट गरिएको खातामा हामीलाई पछ्याउँदछन्।
हे - यदि तपाईंले यस टिपको प्रशंसा गर्नुभयो भने, ट्विटरमा हामीलाई पछ्याउन नबिर्सनुहोस्!
@Martech_zone अनुसरण गर्नुहोस्
टैग: ट्विटर ह्यान्डल परिवर्तन गर्नुहोस्ट्विटर प्रयोगकर्तानाम परिवर्तन गर्नुहोस्तपाइँको ट्वीटर खाता नाम परिवर्तन गर्नुहोस्तपाईंको ट्विटर ह्याण्डल परिवर्तन गर्नुहोस्तपाईंको ट्विटर नाम परिवर्तन गर्नुहोस्कसरीmartech zoneट्वीटर सार्नुहोस्twitterट्विटर ह्याण्डलट्विटर प्रयोगकर्तानाम
सेप्टेम्बर 5, 2017 मा 5: 40 AM
मलाई लाग्छ, अनुयायीहरू नगुमाईकन प्रयोगकर्तानाम अनुकूलन गर्न यो गाह्रो छ। तपाईंले वर्णन गर्ने तरिका यसबाट लाभ लिनको लागि साँच्चै उपयोगी छ। थप पढ्नुहोस्: https://goo.gl/1Qrnih